सैनामैनामा साविक दुधराक्ष अन्तर्गतका गाउँ ब्लक जग्गाको नापजाँच सुरु – Kakhara News
सैनामैनामा साविक दुधराक्ष अन्तर्गतका गाउँ ब्लक जग्गाको नापजाँच सुरु
भदाै ०५, बुटवल । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा बाँकी रहेका गाउँ ब्लक जग्गाको नापजाँच सुरु गरिएको छ । सैनामैना नगरपालिका र नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको नापी विभाग रुपन्देहीको सहकार्यमा शुक्रबार गाउँ ब्लक जग्गाको नापजाँच नगरको वडा नं. ५ बुद्धनगरदेखि सुरु गरिएको हो ।
जग्गा नापजाँचको शुभारम्भ गर्दै सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्र बहादुर कार्कीले साविक दुधराक्ष गाबिस र हालको वडा नं. ५, ६, ७, ८ र ९ का सम्पूर्ण पुराना थारु समुदायका गाउँ बस्तीहरुमा रहेका गाउँ ब्लक (डि–ब्लक ) जग्गाहरुको नापजाँच सुरु गरिएको बताउनुभयोे । कार्कीले भन्नुभयो –“ यी जग्गाहरु विशेषगरी आवसका लागि योग्य छन्, सबैजसो जग्गामा अहिले पुरानो बस्ती बसिरहेको छ । ” जग्गाहरुको नापजाँच गर्ने, श्रेस्ता तयार गर्ने र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्ने गरि तिव्रताका साथ काम गरिने प्रमुख कार्कीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
साविक पर्रोहा र साविक सालझण्डीमा रहेका गाउँ ब्लक जग्गाहरुको यस अघि नै काम सम्पन्न भइसकेको बताउँदै कार्कीले साविक दुधराक्ष गाविस प्राविधिक कारणले केही ढिला हुन पुगेको कार्कीले उल्लेख गर्नुभयोे । उहाँले दुई महिना भित्रमा वडा नं ५, ६ ८ र ९ को पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर भेग पर्ने गाउँ ब्लकहरुको जग्गा नापजाँच गर्ने , श्रेस्ता तयार गर्ने र जग्गाधनी प्रमार्ण पूर्जा वितरण गरिने बताउनुभयो ।
नगरपालिकाका अनुसार अर्को डेढ दुई महिनामा राजमार्गदेखि दक्षिण तर्फ पर्ने गाउँ ब्लक जग्गाको नापजाँच गरि जग्गाधनी पूर्जा उपलब्ध गराइने छ । जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि जनप्रतिनीधि, गाउँ ब्लक जग्गाधनी, राजनीतिक दल, नापी विभाग लगायत सबैको सहकार्य आवश्यक रहने प्रमुख कार्कीको भनाई छ ।
नापी विभाग रुपन्देही प्रमुख अजित कुवंरले रुपन्देहीमा गतवर्षको १३ सय ५० गाउँ ब्लक जग्गाहरु मध्ये १ सय गाउँ ब्लक जग्गाहरुको काम भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विशेषगरि दक्षिण भेगतिर गाउँ ब्लक जग्गाहरुको काम बाँकी रहेको बताउँदै जनशक्तिको अभावका कारण पनि नापजाँच हुन समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । कुवंरले सैनामैनामा वितरण गर्न बाँकी रहेको साविक दुधराक्षको ३७ विगाह १२ कठ्ठा ६ दुर जग्गाको पूर्जा वितरणका लागि नगरपालिकाको पहलमा नाँपी विभागले काम सुरु गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले सैनामैनामा ८ वटा ब्लकहरुको नापजाँच गरिने भएको छ । जसअन्तर्गत करिब ४ सय गाउँ ब्लक जग्गाधनीहरु रहेका छन् । पहिले नापी गर्दा गाउँ वस्तीको घर जग्गा नापी गर्न छुट भएको जग्गालाई गाउँब्लक जग्गा भन्ने गरिएको छ ।